Nk Show New York 8 တွင် 2019k စွမ်းရည်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ခြွင်းချက်အခြေပြုစောင့်ကြည့်မှုတို့ကိုပြသရန် Mediaproxy သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Mediaproxy 8k စွမ်းရည်, အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် features နဲ့ NAB Show ကိုနယူးယောက် 2019 မှာခြွင်းချက်-based စောင့်ကြည့်ရေးဆန္ဒပြ
Mediaproxy 8k စွမ်းရည်, အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် features နဲ့ NAB Show ကိုနယူးယောက် 2019 မှာခြွင်းချက်-based စောင့်ကြည့်ရေးဆန္ဒပြ
မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျ - 1 အောက်တိုဘာလ 2019 - Mediaproxyဆော့ဖ်ဝဲ-based IP ကိုထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည်၎င်း၏ LogServer IP ကိုသစ်ခုတ်ခြင်း, စောင့်ကြည့်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် တဲ N16 အပေါ် 17 ထံမှ 550 အောက်တိုဘာလမှ New York က။
NAB ပြရန် New York ကမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဖန်တီးမှုနည်းပညာကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့ပြပွဲအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြည့်ကြောင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်သော့ချက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့် Mediaproxy အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမှာပုံမှန်ပြသခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ရဲ့နယူးယောက်ကုန်စည်ပြပွဲများအတွက်ကုမ္ပဏီ linear ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် OTT streaming များနှစ်ခုလုံးအတွက်လိုက်နာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ဤဒေသများတစ်ခုချင်းစီလိုင်းများ၏ပြန့်ပွားမှုကြောင့်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအကြောင်းအရာအစဉ်အဆက်ကပိုပြည့်စုံစစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ပဌနာတော်မူသောနည်းပညာသစ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်သည်။
ထုတ်လွှင့်ယခု 8k resolution နဲ့အပြန်အလှန်န်ဆောင်မှုများ၏အလားအလာမှာပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ရှာဖွေနေနှင့်အတူ, စစ်ဆေးမှုများဤအင်္ဂါရပ်ညာဘက်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်စေရန်အရပျ၌ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ Mediaproxy LogServer တစ် proxy ကို resolution ကိုရန် 8k အပါအဝင်မည်သည့် input ကို, converting အားဖြင့်မြင့်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမသာဖြစ်ပါတယ် 8k အဆင်သင့်ဒါပေမယ့်လည်း HEVC နှင့် TSoIP encoded စီးလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။
Interactive ကလူတိုးလူမှုမီဒီယာအပေါ်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသည်အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးများအတွက်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ, Facebook နှင့် YouTube ကိုအဖြစ်ဆိုင်များတွင်ပစ္စည်းပြင်ဆင်ထားသည်နှင့် Mediaproxy LogServer သို့ဤဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံ tools တွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဘယ်လိုများအတွက်တိကျသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ဤကြော်ငြာဘန်ပါထည့်များအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပြင်, image ကိုယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးနှင့်မိုဘိုင်း Device များကပိုမိုကောင်းမွန်သင့်လျော်အောင်ဖို့အချိုးပြောင်းလဲဘို့ features တွေပါဝင်သည်။
linear TV နဲ့ OTT နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, ပလေးအောက်မရှိတော့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (QC) အတွက်နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ပိုပြီးသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်လိုက်နာမှုစစ်ဆေးမှုများ CDN ​​အစွန်းအချက်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပျသောကွောငျ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ဖြစ်အဲဒီမှာရှိပါတယ်, ကြော်ငြာ-သွင်း, Multi-ဘာသာစကားထောက်ခံမှုနှင့်ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုမှာအဖြစ်အပျက်-based channel များကိုပစ်မှတ်ထား။
Mediaproxy ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် MSOs (မျိုးစုံကိုစနစ်ကအော်ပရေတာ) ကိုပိုမိုထိရောက်စွာ QC နှင့်လိုက်နာမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စကေးမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြု IP ကိုပြစ်ဒဏ် boxes တွေကိုအသုံးပြုခြွင်းချက်-based စောင့်ကြည့်မှု, သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ မျိုးစုံဘူတာနှင့်ပလေးအောက်ကိုစီး running network operator များမှ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်နောက်ထပ် feature အသစ်တိုက်ရိုက် source ကိုနှိုင်းယှဉ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကို real-time အတွက်မတိုက်ဆိုင်အကြောင်းအရာသတ်မှတ်နှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းသုံးပြီးတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်းရင်းမြစ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။ မသမာမှုတွေ့ရှိလျှင်သတိပေးချက်တစ်ခုချက်ချင်းအော်ပရေတာမှစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် LogServer အထောက်အကူ SMPTE ST 2110 မီဒီယာအိုင်ပီကို formats ကျော်နှင့် Newtek'' s ကို NDI (ကွန်ယက်စက်ပစ္စည်း Interface) နည်းပညာ။ ဤအရင်းမြစ်များနှစ်ဦးစလုံးအတူလုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့်, ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့လိုက်နာမှုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး Option အအိုင်ပီကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးကိုမှတ်မှာစံချိန်စံညွှန်းမှပြည့်စုံလိုက်နာမှုသေချာ, တိုးမြှင့်နေကြသည်။
"NAB ပြရန် New York ကစက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမြင်ဆှေးနှေးနိုငျတဲ့လူကြိုက်များတဲ့နှင့်တန်ဖိုးရှိသောပြပွဲဖြစ်လာသည် "Mediaproxy ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Erik အော့တို comments ။ "ဒါကြောင့် Mediaproxy ၏ထုတ်လွှင့်နည်းပညာပြက္ခဒိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြပွဲအဖြစ်ရှုမြင်ကျနော်တို့ကကုမ္ပဏီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အဖြစ် linear TV နဲ့ OTT နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအလိုက်နာမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦးအယူအဆကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်မူမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
Mediaproxy မှာဖွစျလိမျ့မညျ NAB ပြရန် ထဲမှာတဲ N550 အပေါ်နယူးယောက် Javits 16 အောက်တိုဘာလမှ 17 ကနေရေးစင်တာ။
#ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 8K ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း လိုက်နာခြင်း ခြွင်းချက် အခြေခံ. စောင့်ကြည့် LogServer Mediaproxy စောင့်ကြည့်မှု Show ကိုနယူးယောက် NAB OTT QC QoE SMPTE ST 2110 2019-10-01
ယခင်: အင်ဂျင်နီယာငါက DEC
နောက်တစ်ခု: Gearhouse အသံလွှင့်အဓိက Riedel Bolero ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူပွဲ comm စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်